> Resource > Lugood > Top iPod in Lugood Transfer Tools in Copy Media Faylal ay si Lugood
users iPod ayaa la rejeynayaa inay u baahan yihiin qalab kala iibsiga iPod in Lugood hadii ay doonayaan inay nuqul ka heeso iyo playlists ka iPod inay Library Lugood ee ay computer. Qaadashada arrimaha copyright ka tixgelin, Apple ma, oo marna ay qorshaynayso in ay bixiyaan qalab kasta ama xal in la sameeyo. Nasiib wanaag, Apple ka sokow, waxaa jira dhowr horumarinta barnaamijka bixiya iPod in Lugood software kala iibsiga. Hoos waxaa ku qoran ah iPod in Lugood qalab kala iibsiga ugu sareeya waa inaad isku daydaa.
1.SynciOS # (Windows)
2.PodTrans # (Windows & Mac OS X)
# 4.4Media iPod in PC / Transfer Mac (Windows & Mac OS X)
U taagan sidii kale Lugood xor ah oo anfacaya, SynciOS waa in loo arkaa in ay tahay iPod in Lugood Transfer dhamaystiran oo lacag la'aan ah. Halkan waa shaxda in ay is barbar SynciOS la Lugood . Ka sokow files syncing ka computer ah in iPod, users u isticmaali kartaa in aad nuqulka friles warbaahinta ka iPod in Lugood. Khasaare waa in aan caawin kara si ay u gudbiyaan files ka iPod in Lugood si toos ah, laakiin hayaan files ka iPod in PC iyo u baahan tahay in aad ku darto files dadka isticmaala si ay u Lugood gacanta.
iPod 2 Lugood freeware;
Ma nuqul karaa files ka iPod si toos ah Lugood,
PodTrans waa ipod fudud oo lacag la'aan ah si ay u qalab Lugood software. Waxa ay u shaqaysaa sida Lugood ah, taas oo ka caawisaa si ay u gudbiyaan files ka Library Lugood ah in iPod ah. Oo in ka badan shaqeeya. Waxay ka caawisaa dadka isticmaala in ay ka iPod ah wareejiyo music in computer ah gurmad. Sida SynciOS, waxa aanu u ogolaadaan isticmaalayaasha inay nuqul ka files ka iPod ah in Lugood Library si toos ah, laakiin waxay u baahan yihiin dadka isticmaala ku darto files ku xoojiyaa ee kombiyuutarka si aad Library Lugood ee gacanta.
Easy in ay isticmaalaan,
Files ma bedeli karaa ka iPod ah in Lugood si toos ah;
Wondershare TunesGo waa aalad xirfad u iPod, iPhone, iPad iyo. Waxa ay taageertaa noocyo kala duwan oo iPod, riix halkan si aad u aragto haddii aad iPod waxaa taageera ama aan. Marka la barbar dhigo ka SynciOS kor ku xusan iyo PodTrans, waa qalab badan oo horumarsan. Waxa ay u ogolaataa dadka isticmaala inay nuqul ka music iyo playlists ka iPod ah in ay si toos ah Lugood, iyada oo aan nuqul kasta. Ka sokow, waxaa nuqul videos iyo sawiro kombiyuutaro iyo sidoo.
Copy files ka iPod in Lugood si toos ah;
Taageerada ee macruufka ugu dambeeyay 7 iyo Mavericks,
taageertaa daydo iPod badan;
Ma aha lacag la'aan ah;
Isku day Wondershare TunesGo maxkamad free verion!
# 4. 4Media iPod in Transfer PC / Mac (Windows & Mac OS X)
4Media iPod in Transfer PC iyo 4Media iPod inay kala iibsiga Mac waa qalab fudud iibsiga iPod in Lugood. Waxay awood u isticmaala inay nuqul ka heeso ka iPod ah in Library Lugood ah iyo sidoo kale. Si kastaba ha ahaatee, markii aan hubi website-keeda rasmiga, ogaato in version Windows ma ordi karaan in Windows 8 iyo version Mac ah lama jaanqaadi OS ugu dambeeyay X 10.9, Mavericks.
Heeso Nuqul ka iPod in Lugood Library;
Mid aad u fudud in la isticmaalo;
Ma taageeri ugu dambeeyay Windows 8 iyo Mac OS X 10.9;
Sidee si ay u gudbiyaan Music ka iPod in Computer